Fanadiovana voa, fanalana vato, fanasarahana gravity - SYNMEC
mpanadio voa tsara
milina fanosotra voa
ascenseur sy conveyor
5XZC-7.5DS mpanadio voa & G...
Fanadiovana sy fanodinana voa...
5X-12 mpanadio voa tsara / voa...
5XWY indented cylinder halavan'ny gr ...
5XZC-L Fanadiovana voa sy...
Orinasa fanodinana voam-bary grai...
Business since2002, miorina amin'ny Huaixi indostria zaridaina, Shijiazhuang City, Shina. Nandritra ny 20 taona mahery, dia lasa mpanamboatra mahomby maneran-tany ho an'ny fanadiovana voamaina & milina fanodinana voa, ary ny lehibe indrindra dia i Shina, manana tany 11 hektara miaraka amin'ny fitaovana fanodinana mandroso toy ny laser cutter, CNC lathe, sns. Tamin'ny taona 2004, izahay nanomboka ny varotra iraisam-pirenena, taorian'ny 5 taona dia nivoatra haingana izany, ka tamin'ny taona 2010 dia nanangana marika iraisam-pirenena fanadiovana voamaina sy milina fanodinana voa izahay, ary namatsy vola ny orinasa tsy miankina 'SYNMEC International Trading Ltd.', mba hanomezana varotra tsara kokoa. serivisy ho an'ny mpanjifa any ivelany. Hatramin'izao, namidy tany amin'ny firenena 160 mahery ny milinanay.
Ny voa aorian'ny fijinjana dia hisy loto maro isan-karazany, toy ny vovoka, mololo, vato, sakana, sns.
Ny orinasa dia mampiditra mpiasa marobe, varotra, talenta ary tompon'andraikitra amin'ny mpanjifa.
Ny mekanisma R&D malefaka dia afaka manome fahafaham-po ny fepetra avo indrindra sy manokana amin'ny mpanjifa.
Ny teknolojia vaovao farany miaraka amin'ny filozofia momba ny tontolo iainana.
Inona no fomba fiasan'ny milina fanadiovana voamaina?
Amin'ny maha-mpanadio voa sy mpanamboatra mpanafatra, zarao aminao.
Fantatsika rehetra fa arakaraka ny lanjan'ny voa no mihamitombo ny taham-pitsimokany, ny heriny ary ny vokatra. Noho izany, mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanasokajiana ny voa amin'ny lanja ao amin'ny indostrian'ny fanodinana voa. Ka firy no fantatrao momba ny gravity separator? Inona no atao hoe Gravity Separator?...
Tandremo tsara ireo zavatra ireo alohan'ny hampiasana ny milina fanadiovana voamaina
Ny milina fanenomana voa dia fitaovana mekanika ilaina amin'ny famokarana fambolena maoderina, ary matetika izy io no ampiasaina amin'ny fitiliana, fanasokajiana ary fanesorana ny loto varimbazaha, katsaka ary voa isan-karazany. Amin'ny maha-mpanadio voa sy mpanamboatra mpanafatra, zarao aminao. Manaraka, andeha hiresaka momba ny raharaha maromaro...